စံပယ်ချို: November 2011
တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် အချစ်ပြီး အချစ်
ခုတော့ ပြစ်သွားပြီတဲ့ -
ခုတော့ ပြောင်းသွားပြီတဲ့ -
အော် လတစ်ခြမ်း အပြုံးမရှိ
မိုးချူပ်ရင် အိမ်ပြန်ရတာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ တစ်ခုပါပဲ
တွေ့သမျှ မြင်သမျှ အရာအားလုံး လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိပဲ
ဘယ်လောက်ပဲ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျကျ
မင်းရဲ့ အစဉ်အလာ မပျက်အောင်လို့
ရှိပါစေတော့ ချစ်သူရယ် ။
မချစ်ရင်လဲ နောင်တရမယ်ချစ်ပြီးရင်လဲ နောင်တရလိမ့်မယ်ချစ်ပြီးရမဲ့နောင်တ ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘ၀မှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါ ချစ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ ။
စာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူများအားလုံးရဲ့ ထာဝရ ရိုးသားစွာနဲ့ ကဗျာတွေဆက်ရေးနေတဲ့jasmine Labels:
ကိုယ်ခန္ဓာ ထဲက မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို တွန်းလှန်လိုက်ပါသူငယ်ချင်း နှလုံးသားထဲက ရေမျောကမ်းတင် အမှိုက်သရိုက်များ တောချောင်းလေးနဲ့ ဆေးစေလိုလို့ ပြောမိတာပါ မြက်စားတဲ့ ခြင်္သေ့ မင်းဖြစ်ချင်နေတာလားကွယ် ကန်ရေပဲသောက်ပါ စားမိတဲ့မြက်ခြောက်များ ပြန်အန်လိုက်နော် မနက်ဖြန်အတွက် အမှားကင်းအောင် အားတင်းလိုက်ပါ သူငယ်ချင်း ကွဲအက်သွားတဲ့ သိက္ခာအတွက် ရိပ်သာဝင်စရာမလိုပါဘူး တရား သဘောနဲ့ အမှားကို အမှန်ပြင် နောက်မကျသေးဘူးနော် ဖြေးဖြေးလေး လျှောကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်တာများလို့ တစ်ခါထဲ ခ၀ါချလိုက်တော့ တလိမ့်လိမ့် စီးဆင်းနေတဲ့ မင်းနှလုံးသားက အမုန်းများတဲ့ သွေးစက်တွေ ဒီဆောင်းရဲ့ နှင်းမိုးလေးနဲ့ မျှောလိုက်ပါ အတွေးထဲက မနက်ဖြန်မှာတော့ နေသာသောနေ့ တစ်နေ့မင်းကိုကြိုနေမှာပါ ။ ရိုးသားစွာနဲ့ အမြဲကြိုးစားပြီး ကဗျာတွေရေးနေမည့်အားလုံးရဲ့ ထာဝရ jasmine Labels:
ချစ်သူ အနားမှာမရှိတဲ့ ဆောင်းရက်တွေ
ဒီနှစ်ဆောင်း အအေးက နဲနဲကြမ်းတယ်နော်
နေရောင်က ပေါ်တစ်ချက် ပျောက်တစ်ချက်နဲ့
နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံ မရှိတော့
မျက်ရည်တွေ တိတ်တခိုး စိုလူးခဲ့ရတယ်
တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ဆက်လို့နေပြီ
သူ့တို့ရဲ့ လှသမှု ကိုပြသခွင့် ရတော့မှာလေ
ရင်ထဲ ထားခဲ့တဲ့ သစ္စာတရား
ချစ်သူ မရှိတဲ့ ဆောင်းရက်ရှည်တွေကို
ပြောင်းလှဲလို့လဲ မရ ခက်တော့နေပြီ ။
ရှည်လျှားတဲ့ ညတာ ကို ခေါက်သိမ်း
ပါလာခဲ့တာ ကျေးဇူး အနန္တပါလို့
ပြောရမှာလားကွယ် ။ အလွမ်းကဗျာတွေ ရေးသားနေခြင်းမှာ ယခုjasmine လွမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ---ရင်ထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုကဗျာအနေဖြင့် ဖော်ပြနေခြင်း သက်သက်ဖြစ်ပါ၏မှန်ရာကိုပြောပြရရင်တော့ ဘယ်ကိုသွားသွား ဘာကိုစားစားတစ်ယောက်ထဲဆိုရင် အိမ်ကလူ ကိုလွမ်းမိပါတယ်အဲဒီ အလွမ်းသာ ရှိခဲ့(ရှိနေ)ပါ၏ ။ရိုးသားခြင်းဖြင့် ကဗျာတွေကို ဆက်လက်ရေးသားနေပါမည် ။
ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည် - သို့သော်
သွားခဲ့ဖူးတယ်ဘယ်ကိုမှ မရောက်ခဲ့ပါ။စားခဲ့ဖူးတယ်ဗိုက် မပြည့်ခဲ့ပါ။ဘုရားရှိခိုးခဲ့ဖူးတယ်တရားသဘော ဘာမှမသိခဲ့ပါ။နွေနေ့လည် အကာအကွယ်မပါလမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်အပူ ဆိုတာနားမလည်ခဲ့ပါ။
အနွေးထည် မပါ ဆောင်းညသန်းခေါင်အိမ်အပြင် ဂီတာတီးပြီးသီချင်းဆိုဖူးပါတယ်အေးချမ်းမှု ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါ။
ထီးမပါ မိုးရေထဲ ကရောင်ကတမ်းထပြီးသွားပါရဲ့မိုးရေတွေ စိုတာ ဘာတွေများလဲ...မေးရမလို။ဆီးနှင်းတစ်ပေါက်ပေါက်မိုး တစ်ဖျောက်ဖျောက်မှာလဲအသည်းတစ်လျှောက်က
စစ်မှန်သော နှလုံးသား တစ်စုံရင်နှင့် ရင်းပြီး ချစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
နယူတန် နိယာမ မှားခဲ့တာလားအသုံးမကျ ငါ့ဘ၀ - နားကြားလွဲခဲ့တာလားအဖြေမသိပေမယ့် အချစ်ရှိနေတာပါပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကား - အများအပြား ရှိပါ၏
သို့သော် လိုရင်းမရောက်ပဲနှလုံးသားပျောက်တဲ့ကိန်းသစ္စာတရား - ပျက်ပါများတော့နာကျင်ခြင်းတွေ - ဒီရေအလား။ချိုသော အပြုံး ကြင်နာသော နှလုံးသား
နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံညင်သာတဲ့ အကြည့်အားလုံးငါမှာရှိနေခဲ့တာနောက်တော့လဲ - အမဲဖျက်သလိုတဲတဲလေးတောင် မကျန်အောင်
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး နတ္တိ ။ စာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူများ အာလုံးရဲ့ ထာဝရjasmine
ချစ်သူတဲ့ လားမင်းနဲနဲ တော့များနေပြီနော်ငါ့အသဲတွေ ဝေခွဲပြီး မသုံးနိုင်သလိုမင်းကိုလဲ တစ်သက်လုံး မမုန်းချင်ဘူးမထူးဇတ်လိုလို ပုံပြင်လိုလို မလုပ်ပါနဲ့ရူးမတတ်ချစ်ခဲ့တာတော့ သတိနဲနဲရပေးပါ ။
ဆောင်းရာသီ ကဗျာတွေအတွက်မင်းကငါ့ကို စာသင်နေတာပေါ့အချစ် စစ်စစ်ကို အမြင်လှစေဖို့ကာလာစုံ ဆိုးစရာ လိုလို့လားသံယောဇဉ် တွေတိုးပေးရင်တော့လုံလောက်ပြီ ထင်တာပဲ ။
မျော်လင့်ချက်တွေ ရင်ထဲမမေ့ မပျောက်ရှိနေခဲ့လို့တနေ့နေ့ မင်းလေးငါ့ရင်ဘတ်ထဲ ရောက်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးသက်သက်နဲ့ အနေခက်နေတာလဲ ကြာခဲ့ပြီ ။
တစ်နေ့တစ်ခြား ပီပြင်လာတဲ့ဆောင်းတောင်ကုန်းပေါ် လှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမြူနှင်းတွေ တိမ်ခိုးတွေ အပြည့်နှလုံးသားထဲမှာလဲ အလွမ်းတွေမျော်လင့်ခြင်းတွေ အပြည့်အပြင်မှာအေးပြီး ရင်တွင်းက ပူတယ်ဒီအပူ လူတွေသိမှာ ကြောက်လို့တိုးတိတ်စွာနဲ့ပဲ ဆက်လက်သိမ်းထားစို့ ။
အစကတဲက ဒီလမ်းမဖြောင့်တန်းတာ သိခဲ့တာပဲပြက္ခဒိန် အသစ်အသစ်တွေကငါ့ကို ကုသပေးတဲ့ သမားတော်တွေပါအရောင် နဲနဲလွင့်နေတဲ့သံယောဇဉ်ကိုတော့ဝါးကူထိုးနေတဲ့ လူနဲစုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေလေရဲ့ ။
ဘလော့ဂါတို့ ဆုံစည်းရာနေရာလေး အပိုင်း(၂)
သဒ္ဓါလှိုင်းပုံနော် ဘေးကတစ်ယောက်ကတော့ မိဂျက် အဲလေမိကက်လဲမသိပါဘူး သိချင်ရင်တွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်နော်
Qe Te ရဲ့ပုံလေးပါရှင် သူ့ဟင်းတွေဘယ်သူခိုးစားမလဲလို့ချောင်းကြည့်နေတာပါနော် သူကအချက်ကောင်းတာကိုး
ဇင်မျိုးရဲ့ပုံနော် တစ်ယောက်ထဲဘယ်သူနဲ့ကစားမလဲ မသိဘူး...
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ lora ပါရှင် သူ့ဟင်းတွေများတို့ကကြည့်ပဲကြည့်နေရတာစားလဲစားရဘူး သူ့ဖာသာသူပဲစားတယ် ဟီးဟီး..(ငိုသံ)
တိမ်တွေပြိုသွားတဲ့ကောင်းကင်က မိုးမြင့်တိမ်လေတိမ်တွေပြိုရင် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အဖော်နဲ့ဗျ (၀ါခေါင်မိုး) မအိမ်သူနှင့်သူ၏မိသားစုပုံနော်
berbielay ဘရဏီရဲ့ပုံလေးပါရှင် မမြင်ဖူးသူများသေချာကြည့်ထားကြပါ
sosegado ရဲ့ပုံပါရှင် ဂျက်လဲခုမှမြင်ဖူးတော့တယ်
မေတ္တာရိပ် ပါရှင် ဘလော့တွေတင်ရတာပင်ပန်းလို့အနားယူနေတာပါတဲ့
မောင်တစ်လုံးပုံပါပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကသူကြိုက်နေတဲ့ ဘလော့ဂါ မလေးမွေးနေ့လုပ်တာလေတိတ်တခိုးဆုတောင်းပေးတာတဲ့
ဘယ်သူလဲသိချင်ရင်သူ့ကိုသာမေးလိုက်ပါနော် အိမ်မက်စေရာနော် သိတယ်ဟုတ် အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းနေမှာပဲကြည့်ရတာလေ
နေမင်းရောင်ခြည်တဲ့လေ တစ်ယောက်ထဲသမားပါပဲဒါပေမဲ့ အတွဲလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့မနဲလိုက်ရှာရတာ မောလိုက်တာဟယ်
မောင်တစ်လုံးသူငယ်ချင်းလေးသိလား လေလွင့်သူတဲ့အမှန်အကန်ကို လွင့်နေတာနော်ဤပုံကိုကြည့်သိပါ၏ပေါ့နော်
ဘလော့ဂါတိှု့ဆုံစည်းရာနေရာလေး အပိုင်း(၁)
ကိုကိုမောင်-ကိုဇော်-အလင်းစက်များ လူပျိုကြီးတွေပေါ့ တိုင်ပင်နေကျတာလေမိန်းမယူဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပါဆရာဦးဟန်ကြည်နှင့်ဇနီးချောcandy လေးပေါ့ စိတ်ညစ်လို့ပုန်းနေတာတဲ့
ညီမငယ်လှိုင်း(အလွမ်းမင်းသမီးလေးပါ) ဘလော့ဂါ အပျိုကြီးတွေလေ သိတယ်မဟုတ်လား အားလုံးအက်ရှင်ကတော့အပြည့်ပဲ
ဇက်ပီလင်းတန်း တစ်ခါတစ်လေမှတွေ့ရတယ်junemoe ဆိုတဲ့တစ်ယောက်လေ သေချာကြည့်ထားမိုဘာမှာလဲရှိတယ်နော်---
ko2 ဆိုတာသူပဲနော် မသိဘူးဟုတ်လား သေချာမှတ်ထားပါ နောင်အနာဂတ် ကိုရင်နဲ့ ရွှေဒိုးမိသားစုပေါ့ အားလုံးသူတို့ကလေးတွေလေ
ပျင်းတာလား ပင်ပန်းနေတာလားတော့မသိဘူးခုတလောစာတွေကဗျာတွေပျောက်နေတာ မင်းဧရာMGTHANT.ME ရဲ့ပုံလေးပါရှင် ပန်းကတော့ဘယ်သူ့ကိုပေးမယ်မသိပါဘူးလိုချင်တဲ့ကြောင်များတန်းစီကြပါလို့---အမျိုးကောင်းသားလေးနဲ့ ??? စဉ်းစားနေတာပါဘယ်သူလဲလို့
သတင်းသမားလေးနေဇော်လင်း သတင်းတွေနောက်လိုက်ရင်းမောလို့တဲ့ဗျာအဖြူရောင်နတ်သမီးလေးပေါ့ကွယ်ဂျက်စမင်းနဲ့ ချစ်ရပါသော ရင်ဘတ်ထဲက မောင်
မင်္ဂလာပါ ဆရာမ Autumn နဲ့သူ၏တပည့်များAH တရုတ်ပြည်ကနေ သူ့အမျိုးသမီးကိုလွမ်းနေတဲ့ပုံ
လရောင်အောက်မှာ လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ဖြိုး ဘ၀ရဲ့စာမျက်နှာများလေသိတယ်နော်ခရစ္စတလ်နဲ့ ဘယ်ဘူနဲ့လဲ ???မကြာခင်ကပဲ ဖူးစာဖက်ရသွားတဲ့ မေသိမ့်သိမ့်ကျော်တို့ စုံတွဲအပျိုးကြီးဘလော့ဂါမမတွေ အေလိုးဗစ်ကစားနေပုံဟိုတလောက မိုးငွေ့က အအေး၂ခွက်ကိုသူတစ်ယောက်ထဲသောက်တာတဲ့လေသူတို့ကတော့၁ခွက်ကို၂ယောက်အဲလေ ၂ကောင်သောက်တာနော်ချစ်ကြတာကိုး
kokoseinygn ဟုတ်ပါတယ်နော် ဘေးကဘယ်သူလဲ ဒုတိယလူ(ဒုဒု)နဲ့ သူငယ်ချင်းလေ ကြွေးရှင်လာလို့ပုန်းနေတာတဲပျောက်နေတာ ကြာပြီ ချင်းကလေးပေါ့ဘလော့တွေလဲမတင်ဘူး လူကြီးတွေစိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်
အောင်မင်းဦးရဲ့ပုံ့ပါရှင် တီတင့်တစ်ယောက်ချက်ရပြုတ်ရ စာတွေတင်ရတာပင်ပန်းလို့ spa သွားခဲ့တာ
မောင်တစ်လုံးလေ စိတ်တိုနေတာ ဘယ်သူဆီကမှ အဖြေမရလို့ဘူး
အိပ်ယာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့လဲ သူနဲ့တွေ့ရင်မေးကြည့်နော်
အမရွှေစင်ဦး နှင့်မိသားစု (ပျော်စရာကြီးနော်)
ဟိုနေ့ကဘယ်သူ---ကိုရင်နဲ့မဒိုးတို့ ရေကူးကြတယ်ဆိုပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြည့်နော် သူတို့မသိစေနဲ့(ဂျက်ဂျက်ကြောက်ကြောက်)
ညီရဲသစ်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စုဘာတွေခိုးစားတယ်ဆိုလားပဲခုတော့ မောပြီး စက်တော်ခေါ်လေရဲ့
အ၀ါ(မောင်တစ်လုံး) ဖြူကြား(စံစံ)မောင်တစ်လုံးက စ တယ်ရှင်-ဟိုကလဲစိတ်ဆိုးတယ်ခေါ်ဘူးတဲ့
ကိုညီလင်းသစ်တို့မိသားစု မောင်တစ်လုံး-ဖိုးခွါး-ညီညီ ဘယ်မှမသွားရဲဘူး
ကြွေးတောင်းတဲ့သူတွေဝိုင်းနေလို့ အဲလိုလေးပဲချောင်းကြည့်ရတာ သနားမိတယ်
သမီးစံဆိုတဲ့ စံစံပေါ့ တစ်ယောက်လဲအဖော်မရှိလို့ အရုပ်ကိုပဲ အဖော်လုပ်နေရပြီ
မိုးငွေ့ရဲ့ပုံလေးပါရှင် နှင်းငွေ့လေးတွေစိုမှာစိုးလို့ ဆောင်းထားတာတဲ့
မြစ်ဆုံ(မောင်မောင်) ပုံပေါ့ ရုရှ မှာသင်တန်းတက်နေတာ ချမ်းသာပေးပါမောင်မောင်ရေအမတို့က ကဗျာပဲရေးတတ်လို့ပါ
ဒီပုံလေးက လမင်းငယ်ပါရှင် သူလဲ အပျိုကြီးအဲလေ အပျိုလေးပါပဲလို့
7 am တဲ့လေ မမြင်းဖူးသူများကြည့်ထားကြပါဂျက်လဲခုမှတွေ့ဖူးတာပါcomeonkiss ပါနော်နာမည်လေးကတော့ ရင်တုန်စရာလေးပေါ့
မင်္ဂလာပါ ရှတာဂျန် ဘလော့ဂါ အသစ်လေးပါရှင် သူကလဲ ချာမပါပဲချင့် သူ၏တပည့်များနှင့်တူတူ
မယ်သံရဲ့အမှတ်တရဆိုတဲ့ Thandar Lwin နှင့်သူ၏ မိသားစုလေးပေါ့
မောင်ဘုန်း ဘယ်သူနဲ့ပုန်းနေတာလဲ လူတွေမိပြီထွက်ခဲ့ ဒါဗြဲ
ဇော်သိင်္ခ နော်သိတယ်ဟုတ် ဘေးကဘယ်သူလဲမသိဘူးတွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်လိုက်နော်
ကြယ်ရောင်မှတ်စု (ဖိုးကြယ်)တဲ့နော် လာပြီးမိတ်ဆက်ထားပါ မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ပင်တွေစိုက်ပြီးပင်ပန်းသွားလို့)
ကြေင်ဖြူရှင်များ မကြည့်ပါဘူး ဘေးကဘယ်သူလဲ သိချင်လို့ပါ
ခင်မင်ရပါသော တက္ကသိုလ်မြတ်မင်းတဲ့လေ ဂျက်နဲ့ခင်တာမကြာသေးပါဘူးကဗျာသမားတစ်ယောက်ပါပဲ -
ယခုဖော်ပြသည့်ထဲတွင်မပါသေးသောဘလော့ဂါတို့ကိုအပိုင်း(၂)တွင်ဖော်ပြပါမည်ရှင်ကြောင်များကိုရှာရန် ခရီးထွက်ရဦးပါမည် ထို့ကြောင့်ဂျက်ကို အချိန်နဲနဲတော့ပေးကြပါရှင်ဦးဦး-ဒေါ်ဒေါ်-ကိုကို-မမ-ညီမငယ်-မောင်ငယ်များစိတ်မဆိုးရန်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပါရှင်စာဖတ်သူများအားလုံးရဲ့ jasmine
၁ ပြောင်းတော့မှာလား "ကိုင်း၊ ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံး...
မုန်းရက်လို့ မေ့ပြီလား တနေ့တခြား ပြုံးဖို့ခက်လာတယ် ချစ်သူ မေ့နိုင်ရိုးလာကွယ် သံယောဇဉ်တွေ ခွေကာရစ် ရင်ထဲကနှစ်နေအောင်ချစ်ခဲ့တဲ့...
ခမ်းခမ်းနားနားလဲမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဘ၀ အတော်များများကို ရှားရှားပါးပါး ကျွန်မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါ၏ ။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီလိုလေးရေးဖြစ်ခဲ့ရင...
အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့ အလွမ်းတွေအတွက် မျက်ရည်တွေကိုပဲ သက်သေလုပ်ပြီး မပြချင်တော့ဘူး။ ဦးတည်ချက်ရှာမရတဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေလဲ ကံကြမ္မာလမ်...
မိုးတွေပြိုတော့မယ် ငိုနေတဲ့ နှလုံးသား ထပ်ဖျားမှာစိုးမိလို့ ကောင်းကင်အောက် လမ်းလျှောက်မထွက်မိအောင် အနိုင်နိုင်ထိန်းရင်း မျက်ရည်မိုးအဖြစ...
ပန်းစံပယ်တွေ ဟိုနားတစ်ရုံ ဒီနားတစ်ရုံ ကဗျာတွေက ဟိုတစ်ပိုဒ် ဒီတစ်ပိုဒ် စံပယ်ရုံတွေ အနံ့ ကုန်ပြီတဲ့ ကဗျာတွေ ကာရံ သေပြီတဲ့ ရနံ့မရှိတဲ့ ပန်းစံ...
ပေါက်ကရ ရင်ခုန်သံစစ်စစ်များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး စံပယ်ပန်းများနဲ့မိုးထားသော
ကဗျာလွင်ပြင် စံပယ်ရဲ့ အကြောင်း
ရင်ခုန်သံ စစ်စစ်တွေကို ကဗျာအဖြစ်ဖန်ဆင်းနေထိုင်သူ တစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်-ကျွန်မတို့နှစ်ဦးနေထိုင်ရာ အိမ်လေးကို ထိုရင်ခုန်သံတွေနဲ့မိုးထားပါတယ်ရှင်
စိတ်ချင်းတူ ခံစားချက်တူသူများ အားလုံးကို
ကဗျာလွင်ပြင်အိမ်လေးကနေ ထာဝရ ကြိုဆိုနေမှာပါ
- အိမ်လေး၏ အမှတ်တရ
Tuesday, February 14, 2011 ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူသစ်ပင်လေးမှ ကဗျာရူး စာရူး ကျွန်မအတွက် အမှတ်တရဖွင့်ပေးခဲ့သောဆိုဒ်လေး(သို့မဟုတ် ကျွန်မ နှလုံးအိမ်လေး)ဖြစ်ပါသည်။ Facebook Badge
စံပယ် ချိုCreate Your Badge
ပေါက်ကရ တောင်ကြီးအလွမ်း နဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်
မလွမ်းမိမှာ စိုးလို့ လွမ်းနေတာ
REAL PLAYER CLICK WINDOWS MEDIA PLAYER CLICK/
***eleven ဂျာနယ်*** ***ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်*** ***အင်တာနက်ဂျာနယ်*** ပလုပ်တုပ်မဂ္ဂဇင်း လိုက်ဖ်စတိုင်မဂ္ဂဇင်း Fashion Magazine Face Magazine
ကောင်းကင်Online မဂ္ဂဇင်း ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း ကဗျာလက်ဆောင်လေးများ
ပတ္တမြားရွှေဂူ ပြစ်မရှိ ပြစ်ရှာလမင်းကို ခွေးဟောင်လို့ရွှေလရောင် ပြောင်မပျက်တယ်ထွန်းလျက်ပင်သာ။မြရွှေဂူ ပတ္တမြားကိုလ၀က်များက ငြူစူစွာညွန်လူးကာတိုက်နဲ။ပွတ်လေလေဂူရွှေမှာ အရောင်ထွက်တယ်ရှေးကထက်ကဲ။( မန်လည်ဆရာတော်)နှင်းဆီပွင့် လယ်တောက ပြန်ပန်ချင်တယ် ခရေဖူးဆိုလို့မောင်ခူးကာပေး။မနက်တုန်းဆီကကြော့ဆုံးကို မောင်မြင်တော့သူ့ဆံပင် နှင်းဆီပွင့်တွေနှင့်ဂုဏ်တင့်တယ်လေး။ ။ မင်းသုဝဏ် ၃၁.၁၂.၁၉၃၂အနုပညာကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာရိုးသားမှုအခြေခံမပါရင်အနုပညာဟာဘယ်လိုမှ ခိုင်မြဲတဲ့အနုပညာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ (မောင်ချောနွယ်) လမ်းသစ်မှာတော့မင်းချစ်တဲ့ ခရေကောင်သူကောက် နင်းသူနင်းအပျင်းပြေ ဆော့သူဆော့ကြွေတဲ့ အပွင့်ကြွေဝေတဲ့ အပွင့်ဝေအဖြူရောင် စံပယ်မွှေးမွှေးတော့ရှိချင်လဲ ရှိမပေါ့သိက္ခာတွေ မစွေသာမာဓိတွေ မစောင်းပဲဖြူစင်ခြင်းတွေရင်ထဲမှာကောင်းကောင်းသိမ်းထားဖို့ပဲလိုတာပါjasmine(ဆုံးဖြတ်ပါ ချစ်သူ ကဗျာမှ)"လူဆိုတာ တစ်နေ့တော့ သေကြရမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ မသေခင် ရသမျှအချိန်လေးမှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကို ခွဲခြားသိဖို့ မကောင်းတဲ့အတွေး၊ မကောင်းတဲ့ စိတ်အကြံ၊ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကို နေ့တိုင်း တစ်နေ့တစ်ခါလောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် အကုသိုလ် အလုပ်တွေ မလုပ်မိအောင် အလိုလို ရှောင်ကြဉ်ပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်"http://myawadezaw.blogspot.com/မှကူးယူပါသည် စံပယ်ချစ်သော အိမ်လေးများ
[image: အမိုက်ကောက်ခွင့်သာပြုရင် လေးလအတွင်း စင်င်္ကာပူကို မီစေ ရမယ် - ကျော်သူ မေလ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့တော် သာယာ လှပသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အတွက်...
ကြိုးတိုတိုနဲ့ပဲ ချုပ်နှောင်လိုက်မယ် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်မရောက်ရင်လည်း နေပါစေ ဘယ်နေ့ပဲရောက်ရောက် နေ့ခင်းလေနဲ့ အသက်ရှုမ၀တာကို မေ့နေခဲ့တာ ကြာပြီ ငါ့တစ်ကိုယ်စာန...
*“ဗျာဒိတ်၊ ဖွားမြင်၊ ဗောဓိပင်၊ စံဝင်နိဗ္ဗာန်နန်း" *ဆိုသည့်အတိုင်း ဤနေ့သည် ဘုရားလောင်းသုမေဒါရှင်ရသေ့ ဘ၀ဖြင့် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား အထံတွင် ဗျာဒိတ်ခံယူသည့်နေ့...
မင်္ဂလာဆောင်အကြိုညတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကာ သတို့သားအဖမ်းခံရခြင်းကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို သတို့သမီးတစ်ဦးတည်း ကျင်းပခဲ့ရသည့်ဖြစ...
Download - *Screenv2.5.4.apk*
Download - *Alien Shapes FULL v1.5.apk*
ကဆုန်လသည်အပူဓာတ်လွန်ကဲသောလဖြစ်သည်. .မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များ ခန်းခြောက်ချိန် ဖြစ်သည်. သို့ရာတွင် လကုန်ပိုင်းတွင် မုတ်သုံလေဆော်သွေး၍ မုန်သုံမိုး တစ်ပြိုက်...
"ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ "
ဖြေ။ ။ ဗုဒ္ဓနေ့မှာ၊ သုဇာတာလျှင်၊ ဃနာနို့ဆွမ်း၊ ခွက်ပါကမ်...
(သင်ဟာ) ဘယ်တော့မှ လူပီသမှာမဟုတ်ဘူး
ဂွင်(ခွင်) ၊ အကွက်ဆိုတာ ဘာလဲ အဖြူကွက်စွန်းထားတဲ့ အနက်ရောင်ပုဆိုးဟာ
ရည်းစားဦး ကို ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကတိလို
နောက်ရည်းစားတယောက်က ရေးပေးဖူးတဲ့ ကဗျာလို
အမေ ခဏခဏ မှာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလို
မြန်မာကဗျာဆိုတာ ဂျို(ချို)နဲ့လား (၂၇)
ရတုချီနည်းတွေက သိပ်မများလှပါဘူး။ နာမည်သီးသန့်လည်း ပေးထားတာ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ စာလုံးရေအလိုက် ကြည့်မယ် ဆိုရင် ၄-မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီချီနည်းတွေက ...
ဆွတ်ပျံ့လွတ်မောဖွယ်ရာ စကားတွေ ဆိုရင်း
အရုဏ်ကျင်းသွားတဲ့ အဲဒီ ညက
သူမရဲ့ အသက်ရှူသံဖွဖွကို ကျနော်လွမ်းတယ် ။
ဗေဒါလမ်း (၁) မယ့်လမ်းပါလား
ဒီချောင်းရေ ဗေဒါလမ်းမှာ၊ တန်းစီလို့လေး ။
မိုးလဲအေးလာပြီဆိုတော့ ပူပူနွေးနွေးဟင်းတွေဖြစ်တဲ့ အပြုတ်တွေ အပေါင်းတွေလုပ်စားကြတာပေါ့...။ ဒီကြက်ဥပေါင်းနည်းလေးက တော်တော်ကိုလွယ်ပါတယ်.....
Miss Universe 2004 first runner-up ဖြစ်တဲ့ Shandi
Finnessey (Miss USA,2004)ကို အသက်ဝင်နေတဲ့ ဘာဘီဂဲ(လ်)အရုပ်လေးလို့ လူတော်တော်များများက တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာ မှားတ...
သင်္ခတ ကို မမြင်တဲ့ သူ ဆိုတာ အန္ဓပုထုဇဉ် သင်္ခတ ကိုမြင်တဲ့ သူဆိုတာ ကလျာဏ ပုထုဇဉ်
အသင်္ခတ ကိုမြင်တဲ့ သူဆိုတာ အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ် ကိုပြောတာ လို့ 
'' ............. မှ ကြိုဆိုပါ၏ ''
မျှော်လင့်ချက်ဟာ အပိုင်းပိုင်း ခုတ်...
[image: Perierga.gr - Strange rings]
Probably would look cute inachild's finger. But who wore it great?
ဒီတစ်ခါတော့ အနုစိတ်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ စားရာ သောက်...
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါ။ အလွမ်းမြို့တစ်ယောက် အပျင်းကြောတွေထူ ဖဘ ထဲပျော်နေပြီး ကိုယ့်အိမ်လေးကိုတောင် လှည့်မကြည့်နိုင်တဲ့ဘဝ။ ဒီနေ့တော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဒ...
Number of View: 400 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။
စာမျက်နှာတွေ တဖျတ်ဖျတ်လှန်သလို ငါငါ ငင ငါ တွေအထပ်ထပ် …
ကွမ်းတစ်ရာ ရေတစ်မှုတ်လောက်နဲ့ မလုံလောက်နိုင်သေး
ထောပတ်ကိတ် လုပ်နည်းကို video file နဲ့ရှယ်ထားတာလေးပါ လသာည
ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဗာလီရီယာ ဆိုသူလေးကတော့ အများနဲ့ မတူ တစ်မူထူးလို့ ဘာဘီ ကော်ပတ်ရုပ်လေးနဲ့ တူပါတယ်ဆိုပြီး အင်တာနက်တစ်ခွင်မှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ...
အခြားတစ်ဖက် များ www.huffingtonpost.com
ထပ်တူမကျခြင်းကို အငြင်းမပွားဘဲ ငြင်းဆိုကြောင်း
သံပြိုင် သူတို့ ဟစ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်
ဘာသာရပ်တိုင်းမှာ သူတို့ ထူးချ...
Why can’t I write down love words?
Why did I get aching every time I try that?
Why my love? Why?
Every sentence and every phrase become
" ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်နေရောက်နေ၊ သင်ဟာမြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်7Online Radio ဟာ သင့်အတွက်ပါ "
ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ online ကနေ မြန်မာသီချင်းသံစဉ်...
“ ဘာလို့လဲ သမီးရယ် . ဒီဖိနပ်ကကျောင်းဖွင့်စကမှဝယ်ထားတာလေ . အသစ်ကြီးရှိသေးတယ်လေ သမီး...
“ ကဲ.. ဘယ်သူ့မြေပုံလေး အလှဆုံးလဲဆိုတာ သိချင်နေကြပြီလား .. ”
“ ဟောဒီအရုပ်ကလေးရဲ့ ပိုင်ရှင် ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။ ”
ဆရာမက အတန်းထဲ ဝင်လာလာချင်း ကြေ...
ဒီနေ့ညနေတော့ ဆေးရုံက duty စောပြီးတာနဲ့ အိမ်ကိုပြန်လာ ခဏအနားယူ ရေမိုးချိုးပြီး ညနေပိုင်းဆေးခန်းထိုင်ဖို့ ထွက်လာလိုက်ပါသည်။ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း လိုအပ်တဲ့...
ယိမ်းခိုလို့ သူနော့ လေအသော့မှာ ဝတ်မှုန်ခင်းတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya okrso လက်ချည်ပွဲအမှတ်တရ.....
အကောင်းမြင် အပြုသဘော တွေးတောခြင်းဟာ ဘဝအောင်မြင်မှု အတွက် သော့ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတိုင်းမှာ တူညီတဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အကောင်းမြင်တတ်ြ...
ဇာတ်ကားတွေလဲ တင်မယ်၊ တင်မယ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းရေးဖို့ ပျင်းနေတာနဲ့ပဲ မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။
မနက်ဖြန်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း ( ၂ )
* * *Safe Heaven*
Ex- wrotealetter toafuture wife of her husband; Alex. She's so generous and luckily he found the right one at last, for god sake. ...
လရိပ်မှာ အမေနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ မနှစ်ကလဲ အမေနှစ်ယောက်လုံးကို အမေများနေ့အတွက် ပိုစ့်ကဒ်လေး လုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ တယောက်တစ...
ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေသော်လည်း အတွေးတို့သည်ကား အခန်းအတွင်း လှုပ်ရှားပြေးလွှားလျက်
ရှိသည်။ လိုက်၍ ဖမ်းမမိနိုင်လောက်အောင်ပါပင...
ငါ ကျကွဲသွားတယ် “ငါ” ခံစားချက်ထဲ“ငါ” ကျကွဲသွားတယ်
ရွှေအိုရောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မနေ့ကအကြောင်းတွေ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လှလှပပခြေထိုးခံသွားတဲ့ မနက်ဖြန်အကြောင်းတွေ...
မသိစိတ်၊ သိစိတ် ဒွန်တွဲ
နှလုံးသားထဲက ရင်ဘတ်ကမ်းခြေမှာ ခရုကောက်တော့ မပြတ်စေချင်ဘူး ….
*~ Ko Ki ~ *
အမေ့နာမည် က ဒေါ်မြသိန်း..။ ဆွေမျိုးတွေ ၊ အမေနဲ့ရွယ်တူ မိတ်ဆွေတွေကတော့ သိန်းသိန်း လို့ ခေါ်ကြ တယ်..။ အဖေ ကတော့ ချစ်စနိုးခေါ်တာလား မသိဘူး မယ်သိန်း...
Android Phone တွေကို iPhone5Style သုံးဖို့ iPhone5Launcher
ကိုယ်က ကိုင်ထားတာ Android ဖုန်းဆိုပေမယ့် ခပ်တည်တည်နဲ့ iPhone5စတိုင်နဲ့ လန်ထွက်နေအောင် နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ iPhone5Launcher ကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ့ခင်ဗျာ...
ဒီရေ ဒီမြေ မလှ..
အောင်ဘာလေ သိန်း ၁၅၀၀ ထီဆု ပေါက်ခဲ့သော်…
ခုတလော..ကျွန်မ ကေပိုးတစ်ယောက်.. ထီ အရမ်းပေါက်ချင်နေပါတယ်.. ပေါက်ချင်တာမှ.. သိန်း ၃၀၀၊ သိန်း၅၀၀ တွေမှ မဟုတ်ပဲ.. သိန်း ၁၅၀၀ ထီဆုကြီးကိုမှ မျှော်မှန်း လိုချ...
တစ်နေ့ ပပနဲ့ဥာဏ်စမ်းကစားကြပါတယ်..သူမေးတာကျွန်တော်ဖြေ၊ ကျွန်တော်မေးတာသူဖြေပေါ့ကျွန်တော်သူနဲ့ တွေပြီးမှကိုယ်ကိုယ်ကိုညံမှန်းသိလာပါတော့တယ်..ဘာကြောင့်လဲဆိုတေ...
*ဟိုး... ခြံထောင့် ပိတောက်ပင်ဆီမှ*
လူ့အဖြစ်ကို ငြင်းဆန်မိတော့မယ် မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးဟာ အိုက်ခမန်းငရဲခန်း လည်မျိုကိုတည့်တည့်စွဲလောင်နေတဲ့မီးလို ငုံထားတဲ့အသံကိုမှ သားသတ်ရုံထဲကအညှီစတွေ လာ.......
မောင် ကျွန်မတို့ဝေးခဲ့ကြတာ ကြာပြီနော်။ ၁၀ စုနှစ်တော်တော်များများ ကြာခဲ့ပြီ။ မောင်ကတော့ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ ခုချိန်ထိ ကျွန်မတို့ထိုင်နေကြ ကော်ဖီဆို...
ရောက်မှပဲ လမ်းနာမည် ကို ပြန်သတိရတယ်။
*ကမ္ဘာရဲ့ ဟိုဘက်တခြမ်းမှာ နေပူနေပြီး*
*တစ်ခုထဲသာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတောင် မရေတွက်နိုင်တဲ့ မတူညီခြင်းတွေ များပြားလွန်းနေတယ...
“ မေကြီး .. မင်းကလည်းကွာ ၀န်ထမ်းဆိုတာ ကမ်းနား သစ်ပင်ကွ၊ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေ ကြုံရတာလည်း အခုမှ မဟုတ်ဘဲ .. မင့်နဲ့ မတူလိုက်တာ မဖြူရာ …. “
လွမ်းစရာတွေများတဲ့ နွေ ။
ရွက်ဟောင်းလဲကြွေ ရွက်သစ်ဝေတဲ့ နွေ ။
ရွာပါ …. ရွာပါ …. သည်းလိုက်ပါလေ
မုတ်သုန်မမှန် မြေနံ့မသင်း
သင်္ကြန်မိုး ငယ် …. လွမ်းမိတယ် …… ။
တူးပို့…. တူးပို့အသံတွေကြားလည်း
လူတွေက အတော့်ကို ခက်သည်။ ကိုယ် မလုပ်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုကို သူတစ်ပါး လုပ်နိုင်တာတွေ့လျှင် ချီးမွမ်းဖို့ထက် ကဲ့ရဲ့ဖို့က အရင် တွေးကြသည်။ အို... ဒီလောက်လေးမျ...
နေရောင်အနည်းငယ်သာ ထိုးသော၊ အပူသိပ်မပြင်းသော အဘွားတို့၏အိမ်ရှေ့ မြေကွက်လပ်ကျဉ်းကျဉ်းတွင် ကျွန်မ ဝါးကုလားထိုင်တစ်လုံးနှင့် စာဖတ်နေခဲ့သည်။ ကျွန်...
အလင်းရနံ့ ကို ဆုပ်ကိုင်ထားချင်မိ..။
လမ်းဆုံ သို့ မဟုတ် လမ်းခွဲ
လားရာတွေက ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့် ကျင်လို့ ..။...
အလုပ်ပေါင်းစုံရှုတ်နေတာနဲ. ဘလောဂ်ဘက်ကို ခြေဦးမတည်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဒီနေ.တော. မမကျားကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ. ကင်ချီလေးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ လုပ်ရတာ အ...
တကယ်တော့ ရန်ကုန်မှာ ပိတောက်မပွင့်သေးပါဘူး...နယ်မြို. လေးတစ်နေရာမှာ ပွင့်နေတဲ့ ပိတောက် ကို
အမှန်စဉ်စစ် ဤစာမူကို ရေးခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ကာလက ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်ကသော် ကိုယ့်တပ်ကိုယ်နင်းသော စာမူဖြစ်၍ ဖော်ပြခွင့်မရခဲ့ပါ။ ယခုသော် စဉ်းစားသုံး...
ရင်ခုန်သံချိုချို: သန်းခေါင်ယံအတွေး: မှောင်မိုက်တဲ့သန်းခေါင်ယံညထဲ တမ်းတမ်းတတသတိရနေတယ် ငါ့ .. နံဘေးနား အမြဲရှိနေတတ်တဲ့ နင့်ကို အားကိုးတကြီးငါ့လက်အစုံနဲ့ ဖက်...
အတူတူဖေးမ ငြိမ်းချမ်းဖို့အရေး ...။
ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာ၌ မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းတတ်ဖို့ အရေးကြီးလှသည်။ ပြဿနာကို မှန်ကန်စွာမဖြေရှင်းတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်သွားရှာသော အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို တင်ပြချင်ပါတယ...
အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို ပြည်သူတွေတော်တော်များများက လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်၊၊ မြင်တဲ့အတိုင်းလည်း မှန်ကန်တယ်...
✡ အတွင်းနဲ့ အပြင် ပြင်ဆင်လို့ ✡ ဝန်းကျင်းကို သတိထား
✡ တောက်တစ်ချက်မှ မခေါက်နဲ့ ✡ ဖနှောင့်တစ်ချက်မှ မဆောင့်နဲ့
အောင်ဆန်းသမီး ရလိုက်တာ အလွန်ကံကောင်းခြင်း by
လက်တလော လက်ပန်တောင်းတောင် အရေး ဖြေရှင်းပေးနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လက်ပန်တောင်းတောင်ေ...
" အဝေးဆုံးကြယ်လေးက ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့ အလင်းတွေ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်...... "
အဝါရောင်မီးမှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားသော ကော်ဖီဆိုင်၏မှန်ပြူတင်းမှတစ်ဆင့် ကောင်းကင်ပြ...
******************************** ဖုန်းစပီကာကနေ လူကြီးမင်းဆိုတာမကြားရတော့အတေ...
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးလို့ ကိုက်ခဲ
ငါလေ ပျော်ရွှင် မျှော်လင့်ခဲ့တယ်
ဒီမောင့် ရင်သည်း အချစ် ပိ...
ငါ ဆုမတောင်း ...
ငါ ဆုတောင်း၏ ...
ထပ်တစ်လဲလဲ ရှုမိ နေတဲ့ည.....
ပြီးတဲ့ စနေ့တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်လေးမှာ ချက်စားဖြစ်တာလေးတွေတင်လိုက်ပါတယ်....
ပူးအခုတလော ဟင်းချက်စားတာလေးတွေမတင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာနဲ့ အခု ရက်ပိုင်း ချက်စားဖြစ်တာ
ကျောင်းသီချင်းလေးပါ.. သီချင်းသစ်လေးမို့ နားထောင်ပေးကြပါဦးရှင်... :))
ကျမတို.SGB Admin များမိတ်ဆက်မှတ်တမ်းတင်အစီအစဉ်မှာ၊ဒုတိယ
အနေနဲ. မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော. ချော.ကလက်ရောင်နဲ.အနက်ရောင်
နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးဆေး ကုမ္မဏီ ...
ချစ်သော မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ပိုစ့် မတင်ဖြစ်တာ ၁ လကျော် ကြာသွားပါတယ် :(( ဆောင်းတွင်းဆို ဒီမှာ အသားငါး ကလွဲရင် အသီးရွက်တေ...
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က မြန်မာတစ်ယောက် ထိုင်းကို အလည်မလာခင် ကြိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။ သူဖုန်းခေါ်တာ အင်တာနက်ကလို့ ပြောပါတယ်။ ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နဲ့။ ပြန်ခေါ်ဖို့ကလည်း...
နံနက်ခင်း တက်သစ်စ နေရောင်ခြည် နွေးနွေးက လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် စွန်းပေနေသည်။ ရော်ရွက်ကြွေတို့ ကလဲ လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ ဒီတစ ပြန့် ကြဲနေ၏။ လေ...
အချစ် မှ ပေါက်ဖွားသော အဖြူရောင် သံယောဇဉ်
တချို့ခင်မင်မှုတွေဟာ ချစ်ခြင်းထက်မလျော့ဘူး... အီစီကလီ မဟုတ်ဘူး... *
*ကံကြမ္မာက ကျနော့်ဘက် မီးမလင်းတဲ့အချိန်
ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖာင်း ၀ိုင်းမျက်နှာ အလှပဂေး ချစ်စရာ
ဖေဖေ မေမေ ထပ်တူပေး
[image: Aungla]လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက် ဘ၀က ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိခဲ့ ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တခိျု့လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်က...
* ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ * EximiousSoft Logo Designer* လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အရင်တင်ထားတဲ့လင့်က သေသွားလို့ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...!* Crac...
ဘ၀ဆိုတာခဏလေးပါ ....... လူ့ဘ၀မှာနေခွင့်ရတဲ့ အချိန်လေးဟာ ခဏလေးပါပဲ ......
ရေခဲတုံးလေးတွေကို ထိုင်နေတဲ့ လူပုံစံသွန်းထားပြီး လေဟာပြင်မှာ
မြစ်တစ်စင်းလို နက်ရှိုင်းတယ် ။
နက်ရှိုင်းမှုကို လိုက်လေလေ ကျယ်ပြန့်မှုက မှန်းဆရ ခက်လေလေပဲ ။
အတက်အကျ မြန်တဲ့ စီးဆ...
သူ့နာမည်က ကိုမြင့်ငွေ ။ ဒါပေမယ့် ကိုကင်ဆာလို့ပဲ ခေါ်ကြတာများတယ် ။ သူကအရမ်းကိုကြောက် တတ်တာ ။ အဲဒါကတော့ ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းကပါ ။
ပပ၀င်းဝင်း လှလှလင်းတဲ့ လတစ်စင်း
အဆင်း သိန်သရေတို့ ဆန့်ထွက်
ကျွန်တော် ...... (အလင်းရိုင်း)
ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရနေပါသဖြင့်
16.12.2012 ရက်နေ့မှ ? . ? ? ရက်နေ့အထိ အနားယူနေပါသည် ။
သက်သောင့်သက်သာမရှိမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငြိမ့်ညောင်းသာသာယာယာ
ပုဒ်မထဲ ပိတ်မိပြီး ဦးခေါင်းကျိန်းနေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လမ်း။
လက်သည်းကြားထဲ ၀င်လာတဲ့ ကြေး။ ကလော်ထုတ်ဖိ...
Htar Wa Ra Shin Than Khwint
တိမ်သားထုတွေသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာ၊ ထို့နောက် နိမ့်ရာမှ မြင...
(၂၀၁၂ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ရက်ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၀၉ တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ဆောင်းပါး)
၉-၈-၂၀၁၂နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဖော်ပြရေးသ...
ညညဆို ထစ်ချုန်းမက်နေတဲ့ အိမ်မက်များ
အိမ်မက်ထဲမှာ … ငါကသူဋ္ဌေးကြီး
အိမ်မက်ထဲမှာ … ငါကသူရဲကောင်း
အိမ်မက်ထဲမှာ … ငါကကယ်တင်ရှင်
စာရေးသူရဲ့အခုလက်ရှိဘလော့ဂ်သည် (၆.၇.၂၀၁၂) ကခဏပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူနောက်ထပ်ဘလော့ထပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ ပို့စ်အသစ်...
ဟိုဖက်နဲ့ ဒီဖက် မျက်နှာချင်းဆိုင်
Credit to http://wynnechenart.blogspot.sg သူကပြောဖူးတယ် “ပြောမှလုပ်တာကျွန်၊ လူဆိုတာ မပြောပဲသိရတယ် …” တဲ့။ အဲ့ဒီစကားမပြောခင်ကတည်းက သူလိုအပ်တိုင်းနားစွင်...
facebook မှာလိုက်သဝှေထိုးရင်း အမြင်မတော်တာလေးတွေ
*“အချိူ့သူမှာ၊ ကျည်းတန်ပါ၊ ချိူ့မှာ လှပ၏၊ အကြောင်းခြင်းရာ၊ မည်သို့ကွာ၊ ကျမ်းမှာ မိန့်တော်ရှိ။*
*ဒေါသမီးလျှံ၊ အကျည်းတန်၊ သည်းခံ လှပ၏၊ အကြောင်းခြင်းရာ၊ ဤသို့...
ဘ၀ဆိုဟာ တိုတိုလေးလို့ ထင်တာပဲနော် … မျက်စိတ်တမှိတ်စာအတွင်းမှာပဲ အရမ်းကို
အဲဒီထဲမှာမှ ဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ရ...
သီအိုရီမသိ ကာရန်မညှိတတ်ဘဲ စိတ်ကူးတည့်ရာ စကားလုံးတွဲကို ကဗျာလို့သတ်မှတ်ရဲတာကတော့ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ ...
ငါလုပ်သမျှ အကုန်ဖြစ်တယ်လို့ 
ဥသြဟာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇာတ်နာလုို့ နွေဥပေါက် နွေတပြောက်ထုိုးရုံနဲ့
ပလက်ဖောင်းပေါ်ကြိုးလက်ဆွဲပြီး ခွေးကျောင်းထွက်လာတဲ့ နွေဥပေါက်
ကျွန်တော် တောင်ကြီး(ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း)ကိုအမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် အထူးသဖြင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်တိုင်းပေါ့ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လာရှိုး-မူဆယ်(ရှမ်းပြည်မြော...
ခေါင်းထဲမှာ အမှိုက်တွေ မရှိမှ ကောင်းမယ်..
အတ္တတွေ ၊ မာနသံတွေ ၊ လောဘဒေါသတွေ..
Copyright © စံပယ်ချို